अाजबाट फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको आइपिओ, कहाँबाट दिने आवेदन ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
अाजबाट फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको आइपिओ, कहाँबाट दिने आवेदन ?
९ माघ २०७३, आईतवार ०४:५०
काठमाडौं, ९ माघ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले ६ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले माघ ९ गते आइतबारबाट शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीको साधारण शेयर निष्काशनमा आस्बा लागू हुने भएको छ । योसँगै आस्बा लागू हुनेमा फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स पहिलो वित्तिय संस्था हुनेछ ।
आवेदन दिने स्थान
प्रकाशित : ९ माघ २०७३, आईतवार ०४:५०